China YF-HY-2 11 dhirowa isina girazi Mugadziri uye mutengesi | Yifan
Living Kamuri Sets
Tafura yepadivi pemubhedha
YF-HY-2 11 dhirowa isina girazi
Mazuva ano, zvisina maturo matafura ari kukwikwidzana neakakwira mutengo wemidziyo zvinhu zvine chekuita nemutengo. Hapana munhu achadzivirira imwe kuti uwane kana iwe uchikwanisa kushandisa zvekushongedza zvisina maturo. Kana iwe urikutsvaga zvisina maturo parizvino, ndinofara kuratidza sarudzo mbiri.
Mazuva ano, zvisina maturo matafura ari kukwikwidzana neakakwira mutengo wemidziyo zvinhu zvine chekuita nemutengo. Hapana munhu achadzivirira imwe kuti uwane kana iwe uchikwanisa kushandisa zvekushongedza zvisina maturo. Kana iwe urikutsvaga zvisina maturo parizvino, ndinofara kuratidza sarudzo mbiri. Tenga girazi remadziro uye gadza chigaro uye zvakare yakanaka uye yakasununguka tafura yekudyira. Ndizvozvo kuti fungidziro yako isina maturo yave kuda kugara. Chechipiri, tenga yekuzora iyo ine mashoma ekuchengetedza kana kutenga mashoma epurasitiki midziyo uye uishandise pamwe chete padivi peiyi isina maturo.
Kuva nekutarisana nezvinetso zvemuchadenga mufurati rako diki? Wati wamboda here kona yako wega? Iwe unoda here imwe nzvimbo yekuchengetera zvako zvekuzora, pefiyumu, uye giya yekugadzira? Iwe uri mukadzi uye unoda kuratidzika zuva nezuva, uye tinokunzwisisa. Ndokusaka tine mhinduro yawanga uchitsvaga! Yedu yekona yekushongedza zvisina maturo seti inouya neatatu-makumbo akamira girazi kuti iwe uongorore mativi ese echiso chako. Usambofa wakafunga nezve "pekuchengetera" zvako zvekuzora zvakare. Iyo inouya nemadhirowa gumi nemaviri ayo anokupa iwe yakawanda nzvimbo kupfuura iwe yaunoda.
Yakagadzirwa nematanda machena inokwana chero nzvimbo nekuti tese tinozviziva, chena chinoenda nechinhu chero. Yakagadzirwa chete kubva kune premium zvinhu.
Takadzidzisa nezvako, kunyangwe iwe uri murume! Unogona kuitengera mukadzi wako, musikana kana mwanasikana. Titende isu, kushamisika kwakakwana!
Isa yako chic petafura pamatafura akasimba eiyo yakazara kutarisa. Inosanganisira 4 madhirowa-akapfigwa-ekuvhara (2x) ayo akajekeswa needu Crystal Lux dhirowa madhiraini
Kukura: 150 * 60 * 80cm
Saizi yedhirowa: 43 * 15.6 * 60cm
Mirror Iine Zvidimbu Zvepasi 45.75 "W x 12.75 'D x 32.5" H
Mirror isina Zviyero zvepasi 43.25 "W x 2.75" D x 31.5 "H
Ruvara: Dema, chena, pink pink (Inowanikwa mune yedu siginecha Glossy White, Pro Nhema, Shimmery Sirivheri, Champagne Goridhe, uye Rose Goridhe premium inopedza)
isu tinotsigira OEM yehukuru uye ruvara, ndapota taura nebasa revatengi
Hollywood glamor aesthetic neyakareruka kusanganisa iyo yakaita kuti vasingaverengeke vanodikanwa vekupoda, zvayakanakira uye nerunako blogger kuwira murudo. Joinha zviuru zvevanitistas vanofara uye rega zuva rega rega ripenye!
EXW Mutengo: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (taura nebasa revatengi)
Min.Order Uwandu: 30Pieces
Mitero Yekubhadhara: T / T.
Pashure: YF-HY-1 13 dhirowa
Zvadaro: YF-HY-3 3 dhirowa
Crystal Hollywood Kupenya Hazvina Basa
Hollywood Vanity Mirror Nemwenje
Hollywood Vanity Tafura Yakagadzwa
Yemazuva ano Sinema Hollywood Vanity Makeup Mirrors
YF-HY-4 8 dhirowa
Hollywood isina maturo YF-D-1
YF-HY-5 madhirowa mashanu
YF-HY-1 13 dhirowa
YF-HY-3 3 dhirowa
Hollywood isina maturo YF-C-1
Chikamu 508, kuchamhembe kweYanzhao Street, Zhengding County, Shijiazhuang, Hebei, China